Maxkamadda ciidanka qalabka sida oo xukun dil ah ridday – Balcad.com Teyteyleey
Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida ee Soomaaliya ayaa maanta u fariisatay Dacwad ciqaabeedkii loo heystay Labo Askari oo ka tirsan Ciidanka Dowladda Federaalka, kuwaasi oo lagu kala magacaabo C/laahi Xasan We’ve got an advantageous offer for your sinequan needs. Check our store and get it only for 0.38 USD today! Maxamed iyo Daahir Maxamed Maxamuud.
Labadan Askari ayaa lagu soo eedeeyay in ay weerar ku qaadeen saldhigga Booliska Degamada Howladaag ee Gobolka Banaadir halkaasi oo ay ku dileen Saacid Maxamuud Suufi oo ahaa Askari tirsan Ciidanka Ilaalada wadooyinka, iyaga oo dhaawacay Gaashaanle Salaad Faarax Xaashi oo ah Taliye xigeenka saldhiga Booliska Howlwadaag.
Maxkamadda markii ay dhageysatay marqaatiyaashii la horkeenay, ayna aragtay cadeymaha la xiriira dacwadan, waxay ku riday Labadan Askari xukun dil ah. Guddoomiyaha Maxkamadda Ciidamada Qalabka Sida Xasan Cali Nuur (Shuute) ayaa ku dhawaaqay xukunka lagu riday labada Askari.
Ma ahan markii ugu horeysay ee maxkamadda Ciidamada qalabka sida ay xukun dil ah ku xukunto askar ka tirsan ciidamada Dowaladda fadaraalka Somalia.
Shabaab oo qabsaday deeganka Goobweyn